February 24, 2021 - Padaethar
February 24, 2021 by Padaethar
သိပ်လှတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အချစ်ရေး ကံမကောင်းတတ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းမျာ
သိပ်လှတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အချစ်ရေး ကံမကောင်းတတ်တဲ့ အကြောင်းအရင်းများ လူအများစုက လှတဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုရင် သူတို့ချစ်သူကလည်း တုန်နေအောင်ချစ်ပြီး အချစ်ရေးအရမ်းသာယာမှာပဲလို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ကယ်တမ်း သိပ်လှတဲ့ မိန်းကလေးတွေက အချစ်ရေးသိပ်ကံမကောင်းတတ်ကြပါဘူး။ ဒီအချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာလို့ အဲ့လိုဖြစ်ရတာလဲလို့ အမြဲသိချင်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် ဘာကြောင့်ကံမကောင်းရလဲ ဆိုတဲ့အချက်လေးတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… ရွေးချယ်ရခက်တယ် လှတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သူတွေ ၊ ပိုးပန်းနေတဲ့သူတွေထဲက ဘယ်သူက တစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူမှန်း ရွေးချယ်ရတာအရမ်းခက်ပါတယ်။ သူတို့ကို တစ်ကယ်ချစ်လို့ ကြိုက်တာလား ၊ အလှအပေါ်မှာပဲ မက်မောလို့ ကြိုက်တာလား ၊ ချောချောလှလှ ရည်းစားလေး ရထားတယ်ဆိုပြီးပဲ ကြွားလုံးထုတ်ချင်လို့လားဆိုတာ တော်တော်ခန့်မှန်းရခက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ကယ်မချစ်ပဲ တပ်မက်စိတ်နဲ့ အရာရာဖြည့်စည်းပေးနေသူတွေကို ရွေးမိတတ်ကြပါတယ်။ အမြင့်မှန်းလို့ အချစ်ရေးမှာ အဘက်ဘက်ကပြည့်စုံနေပြီး ကိုယ့်ကို ဂရုမစိုက်ပဲ … Read more
ဒီ၂၁ရာစုမှာ ရှာရခက်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သစ္စာတရား
မင်း သစ္စာတရားဟာ ဒီ၂၁ရာစုမှာ ရှာရခက်သွားပြီကွ ကိုးတန်းနှစ်ကတည်းက မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်နဲ့ ငါးနှစ်ကျော်တွဲလာတဲ့ ညီလေး ဟိန်းရာဇာရေ…။ မင်း သစ္စာတရားဟာ ဒီ၂၁ရာစုမှာ ရှာရခက်သွားပြီကွ။ ငါ ရှက်လိုက်တာ။ ၂၁ရက် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၂၁ရက်နေ့ ညီမလေးမြသွဲ့သွဲ့ခိုင် (မင်းရဲ့ချစ်သူ) ဈာပနကိုလည်း မင်းရောက်လာတယ်။ တွဲလာခဲ့တာ ကြာပြီမို့ ရည်းစားအဖြစ်က ပြတ်စဲတယ်ဆိုတဲ့ ဖြတ်စာကိုလည်း မင်းကိုယ်တိုင် အခေါင်းထဲထိ လာထည့်ခဲ့ရသေးတယ်။ အခုလည်း ချစ်သူ့မျက်နှာကို မင်းနှလုံးသားပေါ် တင်သွားပြန်ပြီလား။ တက်တူးထိုးနေချိန် ဖွင့်ထားတဲ့သီချင်းက နှင်းဝေတဲ့ဆောင်းဆိုပဲ။ မင်းမျက်နှာ ဘာဖြစ်နေလဲ ငါကြည့်မိတယ်။ မင်းရင်ထဲ ဘယ်လိုခံစားရမလဲ ငါသိပါတယ်ကွာ။ ခေတ်မီကိရိယာတွေနဲ့ တိုင်းရင်လည်း အတိအကျ ထွက်ချင်မှထွက်မယ်။ ငါ့ခံစားမှုက ဘာနဲ့တိုင်းတိုင်း ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး။ အခုတော့ ဒီလောက်ပဲ ရေးနိုင်လို့ နောက်မှအကျယ်ရေးပါ့မယ်ကွာ။ အခကြေးငွေမယူဘဲ … Read more
ဖူးစာရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူးကြမှာပါ သင့် ဖူးစာရှင်ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ ဖူးစာရှင်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင်နဲ့ ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်မှာ တွေ့မလဲဆိုတာကို ဘယ်လိုမှ မှန်းလို့မရပါဘူး။ ဒါပင်မဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာရှင်လို့ ထင်သောသူက ကိုယ်နဲ့တူညီ ချက်တွေကတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုတူညီချက်လဲ ဆိုရင်တော့ အောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ရင် နားလည်သွားပါလိမ့်မယ်။ ၁. လက်ချောင်းလေးတွေက တူနေတယ်။ သူကိုတွေ့တဲ့နေ့မှာ ဘာရယ်လို့မဟုတ်ဘူး သူ့ရဲ့လက်ချောင်းလေးကို ကြည့်လိုက်သောအခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ တော်တော် တူနေတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ချောင်းလေးတွေက ပုံစံကနည်းနည်း ထူးဆန်းနေတာကြောင့် တူတဲ့သူက ရှားပါတယ်။ လက်ချောင်းတင်မက လက်သည်းလေးတွေလည်း တူနေတာပါ။ ၂. စိတ်ထဲကနေရာချင်းလဲ တူနေတယ်။ သူနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခါ ဘာရယ်လို့မဟုတ် ငယ်ငယ်တုန်းက သွားခဲ့တဲ့နေရာထဲက အကြိုက်ဆုံးနေရာလေးတွေလည်း တူနေတယ်။ သူနဲ့ ကြီးပြင်းတဲ့နေရာက … Read more
သူငယ်ချင်းဘ၀ကနေ အဆင့်တက်နိုင်ဖို့ ဒီလိုလေးတွေ ကြိုးစားကြည့်မယ်
သူငယ်ချင်းဘ၀ကနေ အဆင့်တက်နိုင်ဖို့ ဒီလိုလေးတွေ ကြိုးစားကြည့်မယ် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ အနီးစပ်ဆုံး သူငယ်ချင်းကိုမှ ချစ်မိနေသူတွေ အတွက်၊ သူငယ်ချင်းလည်း မက ရည်းစားလည်း မကျတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ဒီနည်းလမ်းလေးက အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာပါ။ တကယ်တော့ သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ စည်းက တကယ့်ကို အဆင့်တက်ဖို့ ခက်ခဲတတ်တဲ့ စည်းတစ်ခုပါနော်။ ဒီစည်းကို ဒီလိုလေး ဖြတ်ကျော်ကြည့်ကြမယ်။ လေ့လာပါ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ဘက်ကနေ သူငယ်ချင်းထက် တစ်ဆင့်တက်နေတာတောာ့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် သူ့ဘက်ကရော သင့်ကို ဘယ်လိုစိတ်ထားလဲဆိုတာကို သိဖိုိ့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အရင်ဆုံး သူကိုယ့်ကိုယ် နည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားမှု ရှိမရှိဆိုတာကို လေ့လာသင့်ပါတယ်။ သူ့ဆီမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထက် ပိုနေတဲ့ အမူအရာတွေ ရှိနေရင်တော့ သင့်အတွက် အခွင့်အရေးပါပဲ။ သေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ အရင်ဆုံး … Read more
Crush နဲ့ မဝေးစေဖို့ ဘယ်တော့မှမပြောသင့်တဲ့ စကားကြီး (၆) ခွန်
Crush နဲ့ မဝေးစေဖို့ ဘယ်တော့မှမပြောသင့်တဲ့ စကားကြီး (၆) ခွန်း သင်ကြိတ်သဘော ကျနေတဲ့ crush တစ်ယောက် ရှိနေပြီလား။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီစာကို ဆက်ဖတ်သင့်နေပါပြီနော်။ စကားလေး တစ်ခွန်းကြောင့် crush နဲ့ ဝေးမသွား ရအောင်လို့ လုံးဝရှောင် ရှားသ့င်တဲ့ စကားကြီး (၆) ခုကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့.. (၁) အရင်ရည်းစားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာ ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် မကောင်း တာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင် ရည်းစားနဲ့ ကိုယ့် crush နဲ့ကို နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောမိတာမျိုးဟာ သင့်အနေ နဲ့ သင်ဟာ ex ကို စိတ်မပြတ်သေး ပါဘူးလို့ သူတို့ကို ထင်စေပါ တယ်တဲ့လေ ။ (၂) ဘာလို့စကားပြန်မပြောတာလဲ ကိုယ်ကစာပို့ … Read more
သင့်ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်တော့ အချစ်ကိုရှာဖွေသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း(၅)ချက် အချစ်ဟာပူလောင်တယ်၊ လူကို ဒုက္ခပေး တယ်၊ အသည်း ကွဲစေ တယ်၊ ဘဝပျက်သည်အထိတောင်ဖြစ်စေ နိုင်တယ် စသဖြင့် အချစ်ကြောင့်နာကျင်ခံစားရဖူးသူတွေကမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် နာကျင်ရဖူးလို့ အချစ်နဲ့မတွေ့ချင် သူတွေလည်း ရှိသလို၊ မကောင်းတာတွေပဲကြုံ ရတယ် လို့ပြောတဲ့ စကားတွေ ကိုကြားပြီး အချစ်နဲ့မတွေ့ချင်ဘူး၊ အချစ်ကိုမရှာချင်ဘူးလို့ ငြင်းနေတဲ့ သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ လူတိုင်း ဘဝမှာ အချစ်ကိုရှာဖွေသင့် ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့…. သင့်ဘဝမှာ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်တော့ အချစ်ကိုရှာဖွေသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း(၅)ချက် ၁။ ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ရယူခြင်းအကြောင်း သင်ယူနိုင်တယ် အချစ်မှာ ကိုယ်ကချည်း ပဲပေးနေလို့ အဆင်မပြေ သလို၊ ကိုယ်ကချည်းပဲ ရယူချင်နေလို့လည်း မဖြစ်ပါ ဘူး။ ကိုယ့်ဘက် ကရယူတာနဲ့ ပေးဆပ် … Read more
ာကြောင့် လူတစ်ယောက်ကိုပိုချစ်လာလေ ရှောင်ဖယ်ဖို့ကြိုးစားလေ ဖြစ်ကြရတာလဲ
ဘာကြောင့် လူတစ်ယောက်ကိုပိုချစ်လာလေ ရှောင်ဖယ်ဖို့ကြိုးစားလေ ဖြစ်ကြရတာလဲ သင်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်မိ တာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ရယူဖို့ထက် စွန့်လွှတ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ရှေ့ဆက်မတိုးဖို့ ကိုသာ စဉ်းစား မိတတ်တဲ့ သူလား။ သင်တစ်ယောက်တည်း ဒီလို ခံစားနေရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတော်တော် များများဟာလည်း အလားတူပဲ ခံစားရတတ် ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုမျိုးခံစားမိနေရ တာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးတွေ ကိုတော့ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါအုံး။ (၁) အတိတ်ဆိုးတွေ သင့်မှာအချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မကောင်းတဲ့ အတိတ်တွေ ရှိနေခဲ့ လို့ပါ။ ဥပမာ ဘယ်လောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစား သင်ချစ်နေတဲ့သူက သင့်ကိုပြန်ချစ် မလာတာမျိုး၊ မကောင်းတဲ့သူနဲ့ ဆုံခဲ့ရတာမျိုး၊ စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အချစ်ရေးကို ကြုံဖူးခဲ့ တာမျိုး ကြောင့်ပါ ။ … Read more
သူသင့်အပေါ် တိတ်တိတ်လေး စွဲလမ်းမိနေပြီဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ အချက်တွေ
သူသင့်အပေါ် တိတ်တိတ်လေး စွဲလမ်းမိနေပြီဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ အချက်တွေ အချစ်ဆိုတာ အချိန်နေရာမရွေး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင် ပါတယ်။ ကိုယ်ဘယ်လိုမှ မထင်ထားတဲ့ သူအပေါ်မှာလည်း ချစ်မိ သွားနိုင်သလို ကိုယ် လုံးဝ ထင်မှတ်မထားတဲ့ သူဟာလည်း ကိုယ့်အပေါ် ချစ်မိနေ တတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ အချိန်တွေက လုံခြုံမှု မရှိပဲ မြင်သာ ထင်ပေါ် နေတတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဒီအချက်တွေက သင့်အပေါ် တိတ် တခိုးလေး စွဲလမ်းနေမိပြီ ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်နော်။ အချိန်ပေးတတ်ခြင်း ယောကျာ်းလေးတွေက သူတို့ မနှစ်သက်တဲ့ သူတွေ အတွက် အချိန်ပေးရမှာ နှမြောတွန့်တိုသလောက် သူတို့သဘော ကျတဲ့ သူအတွက်ဆို မအားလပ်တဲ့ ကြားကတောင် သူတို့ရဲ့ အချိန်တွေကို ဖဲ့ပေးတတ်ကြ ပါတယ်။ … Read more